Web and “Fats” – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Life. Bookmark the permalink.
← Alexandra Arch သွားတောလား
6 thoughts on “Web and “Fats””
MrDBA | March 29, 2009 at 1:44 am
အင်း … ဆိုတော့ ဘာလုပ်မှာလဲ .. ဘလော့ဖြတ်မှာလား ဆက်လုပ်မှာလား။ ဝိတ်လျှော့မှာလား ဆက်တီးမှာလား။ ပြောပြောရှင်းပါ။ 😛
ကုမ်ရာသီသူ | March 29, 2009 at 2:01 am
အဟီး။ အားလုံးကို ပိုနေမြဲ၊ ကျားနေမြဲဖြစ်အောင် ဆက်တီးမြဲ၊ ဆက်လုပ်မြဲ (တစ်ခုပဲ၊ Snacking တော့ လျှော့မှဖြစ်တော့မယ် ထင်တာပဲဗျ၊) Bro. DB ကြီးတို့ရော? 😉
ုkom | March 29, 2009 at 2:54 am
သီဟသစ် | March 29, 2009 at 3:54 am
Cbox မရှိလို့ ဒီမှာ အော်သွားပါတယ်။
လာလည်ပါတယ်။ ၀ိုင်သောက်ပြီး ပြန်သွားပါပြီ။
ကုမ်ရာသီသူ | March 29, 2009 at 5:40 am
မမ။ သူများ မေ့ချင်ယောင် ဆောင်နေလို့ကို မရတာဗျ။ အတော် ဆိုးတာနော် 😦
ကုမ်ရာသီသူ | March 29, 2009 at 5:41 am
အဟား Cheers! 😀